Ngwa enyemaka mbụ
Akpa egwu akụrụngwa
Akpa akpa akpa/ Njem
Akpa akpa Laptọọpụ
Akpa akpa ụlọ akwụkwọ
Akpa Tote & Duffle
Akpa nri ehihie
Akpa èbè/akpa ozi
Akpa ịkụ azụ
akpa mgbochi mmiri
Yichie Ngwa Gị N'ụdị
Ọ dịtụla mgbe ị chere ajụjụ ndị a: Gịnị ma ọ bụrụ na piano nwere ike ịbụ abụ? Kedu ka guitar si amụta ịkpọ obere ụda? Enwere ike ịkụziri ngwa ahụigodo ka ọ na-efegharị ka cello? Ajụjụ ndị a nwere ike ịkpalite na mkpali okike nke otu akụkọ bipụtara na New Yo...
Ngwa enyemaka mbụ bụ ihe dị mkpa n'ọtụtụ ọnọdụ
N'agbanyeghị ebe ị bi, ịnwe ngwa enyemaka mbụ dị mkpa n'ihi na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ anyị niile ga-achọ ya n'oge ụfọdụ ma ọ bụ ọzọ. Ngwa enyemaka mbụ nwere ike ịbụ nke ukwu ma ọ bụ nke zuru oke. Yabụ ihe ịchọrọ, dabere ma a zụrụ gị na enyemaka mbụ ma ọ bụ na ịchọrọ ịchekwa naanị isi ihe.
Ibu akpa nri ehihie abụrụla ihe na-ewu ewu?
"Hey, kedu ihe ị na-eme atụmatụ iri nri ehihie?" "Odochaghị m anya; M ka na-achọgharị…” “Mụ onwe m, mgbe m na-achọgharị ngwa ewepụtara, ọ na-adị m ka m nwere ike ịgwa otu ha si atọ ụtọ n'aha ha.” “Kpọmkwem! Na isi ihe bụ na m ụdị na-efunahụ m agụụ site nnọọ ịchọ nri; M ga-abịa...
Akpa Tote Atọ Na-eme Kasị Mma
A bịa n'ime njem, ma ọ bụ njem kwa ụbọchị ma ọ bụ njem azụmahịa ma ọ bụ njem ezumike, kedu ihe kacha dị egwu nke na-eme ka uche gị pụọ ruo nwa oge ọ bụghị ọbụlagodi mgbe njem gị malitere? Ị gụrụ uche m! Nkwakọ ngwaahịa ahụ n'ezie! Ma ọ bụ nha ma ọ bụ ụdị ma ọ bụ ọrụ nke akpa ahụ,...
Akpa dinta ọhụrụ Quanzhou & Ụlọ ihe ngosi
site admin na 21-08-10
Ụlọ ọrụ ahụ jikọtara na HongKong New Hunter Investment Ltd., ọkachamara na mmepụta nke ụdị akpa dị iche iche; ugbu a, o nyela OEM ọrụ maka ihe karịrị 100 ika emepụta. Ụlọ ọrụ ahụ nwere ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke mbụ nke oge a nke 11000 square mita na elu nke ...
Anwansi nke akwa akwa
Uwe ndị nwere ike imebi ihe na-ezo aka na akwa ndị ahụ na-emebi ngwa ngwa na n'ụzọ nkịtị site na iji microorganisms. A na-ekpebikarị ịdị ndụ nke akwa akwa site na ọnụọgụ kemịkalụ ejiri na okirikiri ndụ akwa. Ka a na-eji kemịkalụ na-abawanye, ka ọ na-ewe ogologo oge maka akwa iji bidegrade ...
A ga-eme ngosi ngosi Canton nke 129 n'ịntanetị n'etiti Eprel 15 ruo 24
A ga-eme mmemme Canton nke 129 n'ịntanetị n'etiti Eprel 15 ruo 24. A ga-eme ngosi ngosi mbubata na mbupụ nke China nke 129 na ntanetị n'etiti Eprel 15 na 24. Ịga n'ihu na-enwe nnọkọ nke 129 n'ịntanetị ga-eme ka uru dị na mgbochi na njikwa nke COVID sie ike. -19 ọrịa na-efe efe, yana mmekọrịta ọha na eze ...
Akpa ndị na-egbochi nje
site admin na 21-01-14
N'ime mbọ anyị iji nyere nsogbu nke Corona-Virus 19 aka, anyị na-akwado Sanitized® nke nwere afọ 80 iji mepụta ngwọta mgbochi nje. Kedu ihe bụ Antimicrobial Fabric? Enwere ike ịkọwa teknụzụ mgbochi nje dị ka ihe na-arụ ọrụ ibibi ...
Laghachi na Mmepụta
Ebe ọ bụ na ọ laghachiri n'ọrụ na mmepụta na February 10th, ụlọ ọrụ anyị enwetawo mmalite dị mma n'ime ọnwa mbụ nke nlọghachi ọrụ site n'ilekwasị anya na mgbochi ọrịa na njikwa na mmepụta mmepụta ihe, yana usoro iwu ndị ahịa na-aga n'ihu. N'ime ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ọnọdụ ahụ nwere ike ...
Akpa emere site na karama plastik
Kedu ihe bụ akwa ejigharịgharị? A na-eji akwa e ji eke ma ọ bụ nke sịntetik eme naanị uwe kamakwa n'ụlọ, ụlọ ọgwụ, n'ebe ọrụ, ụgbọ ala, n'ụdị ihe nhicha, dị ka ihe ntụrụndụ, ma ọ bụ ihe nchebe na ihe ndị ọzọ. Ọ bụrụ na edoziri akwa ndị a, chịkwaa ya ma jiri ya mee ihe ọzọ iji ...
Email: ngwaahịa @hunterbags.com